राजधानीमा यसरी धुमधामका साथ नाचियो साकेला (भिडियो र फोटोफिचरसहित) | Rajmarga
राजधानीमा यसरी धुमधामका साथ नाचियो साकेला (भिडियो र फोटोफिचरसहित)
काठमाडौ । वसन्त ऋतुमा वालीनाली राम्रो होस् सबैमा सुख शान्ति, सुस्वास्थ्य तथा समृद्धि होस् र दैविप्रकोप एवं बिपत्ति नआउन भनि उभौली उभौली पर्व मनाउने गरिन्छ । किराँत सुनुवार, राई, लिम्बु र याक्खा जातिको महान चाड साकेला साकेन्वा उभौली साकेला नाच चण्डिपूर्णिमादेखि सुरू हुन्छ । अन्य वर्षहरुमा चण्डी पूर्णिमाकै दिन राजधानीको टुँडिखेलमा साकेला नाच्ने गरिए पनि यो वर्ष भने शनिबार धुधामका साथ साकेला पर्व मनाइएको छ।
किराती रितीअनुसार भूमिको पूजा गरी उभौली चाड अर्थात भूमिपूजा गरी चण्डीनाच नाँच्दै एक महिनासम्म मनाउने गरिन्छ । यो पर्व चण्डिपूर्णिमा अर्थात सुम्निमाको सृष्टि भएको दिनदेखि यसलाई सांस्कृतिक महोत्सवको रूपमा मनाउने पनि गरिएको छ । यो पर्व पृथ्वीमा कृषि युग सुरु भएदेखि प्रचलनमा आएको विश्वास गरिन्छ ।
उभौली साकेला चाडमा राईहरू आफ्नो जातीय पहिरनमा साकेन्वा सिली नाच्छन् । हातमा चौरीको पुच्छर, सिल्लिमो, पोमी, चमर र सिम्कौली सेउली लिएर नाचिन्छ । स्याउला, ढोल, झ्याम्टा, बिनायो तथा हारी छातीमा झुन्ड्याएर उनीहरू आफूलाई सजाउँछन् । गोलाकार घेरामा रहेर नाचिने साकेला नाचमा अहिले सबै जातीका युवायुवतीको सहभागिता बढ्दो छ ।
किरातीहरू प्रकृतिपुजक भएकोले प्रकृतिलाई खुसी पारी हरेक वर्ष वाली लगाउने समय चण्डिपूर्णिमामा उभौली र अन्न वाली पाकिसकेपछि खुसियाली मनाउँदै उधौली (मंसिरे पूर्णिमा) विशेषरूपले मनाइन्छ । अन्नबाली लगाउने समयमा मनाइने चाड उभौली बालीनालीमा रोगव्याधि नलागोस्, बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट बाँचियोस् तथा सुम्निमा र पारुहाङले सम्पूर्ण सृष्टिजगत्को रक्षा गरून् भन्ने कामनाका साथ मनाइन्छ । दिन लामो हुन थालेको दिन अर्थात् पूर्णिमादेखि यो चाड सुरू हुन्छ ।
Previous post: मिडिया काउन्सिल विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्छ : वरिष्ठ नेता नेपाल
Next post: लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई यसरी खोज्दैछ सरकार
सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्यो, कसको कति बढ्यो ? हेर्नुहोस् !
पश्चिमी वायुको प्रभाव, आज पनि हावाहुरी र वर्षाको सम्भावना
सरकारको नेतृत्व परिवर्तनबारे प्रधानमन्त्री ओलीले ब्रिटेनमा के भने ?